.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: အသည်းကွဲသီချင်းများစုစည်းမှု
အသည်းကွဲနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ။ (အသည်းမကွဲတဲ့သူတွေမပါပါ) ခိခိ
1 ပြောပေးကြပါ ဟန်ထူးလွင် Click Here !! 2.00 MB
2 ငါတို့ဝေး လွှမ်းပိုင် Click Here !! 2.00 MB
3 အသည်းကွဲသီချင်းသစ် လေးဖြူ Click Here !! 2.00 MB
4 ငါ့အနားနား snare (featuring aungthu) Click Here !! 2.00 MB
5 ရက်စက်မှကြေကွဲ စိုင်းစိုင်း Click Here !! 2.00 MB
6 အပြာရောင်လမ်းခွဲ စိုင်းစိုင်း(feat အိမ့်ချစ်) Click Here !! 2.00 MB
7 အလွမ်းဝင်္ကပါ အစ္စဏီ Click Here !! 2.00 MB
8 အမှတ်မရှိ wanted Click Here !! 2.00 MB
9 ခွင့်လွှတ်ထားပါတယ် wanted Click Here !! 2.00 MB
10 နောက်ထပ်မညာပါနဲ့ wanted Click Here !! 2.00 MB
11 အဆင်ပြေပါစေ ပူစူး Click Here !! 2.00 MB
12 အဆိုးမလေးနှင့်ကျွန်တော် ဒေါင်လွဏ်း Click Here !! 2.00 MB
13 အရာရာမင်း အောင်လ Click Here !! 2.00 MB
14 ချစ်သူသိပါစေ ကိုကိုမောင် Click Here !! 2.00 MB
15 အချစ်ကြီးသူအရှုံး ကောင်းကောင်း Click Here !! 2.00 MB
16 နောက်ဆုံးရင်ခွင် အာဇာနည် Click Here !! 2.00 MB
17 လွမ်းနေပြီ မိုးဇက် Click Here !! 2.00 MB
18 မလွမ်းလောက်ပါဘူး စိုင်းစိုင်း၊မိုးမိုး Click Here !! 2.00 MB
19 မင်းလေးသိဖို့ ဒီဖြိုး Click Here !! 2.00 MB
20 ချစ်သူရဲ့ပုံပြင် အေနွန် Click Here !! 2.00 MB
21 ပျော်သလိုနေလိုက်တော့ ညဏ်လင်းအောင် Click Here !! 2.00 MB
22 ပျော်ရင်ပြီးတာပဲ ဟဲလေး Click Here !! 2.00 MB
23 ဒါဏ်ရာမဲ့အနာ ဟဲလေး Click Here !! 2.00 MB
24 မမေ့နဲ့ ထူးအယ်လင်း Click Here !! 2.00 MB
25 အချစ်လို့ခေါ်သလား ထူးအယ်လင်း Click Here !! 2.00 MB
26 မုန်းဖို့လွယ်တယ်မေ့ဖို့ခက်တယ် သြရသ Click Here !! 2.00 MB
27 အလွမ်းသင့်ပန်းချီ အောင်လ Click Here !! 2.00 MB
28 ဟုတ်လို့လား ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
29 တိတ်တိတ်လေးပါပဲ ဆိုတေး Click Here !! 2.00 MB
30 ဆက်ချစ်ခွင့်လေး ငဲငယ် Click Here !! 2.00 MB
31 မင်းမရှိတဲ့မြို့တော် အာဇာနည် Click Here !! 2.00 MB
Posted by FlashSongCrazy at 06:24